Mpamaky trano tetsy Mandroseza Noraisim-potsiny niaraka tamin’ny basy kilalao
Tratra teny amin’ireo roalahy mpamaky trano ny fitaovana entina mampihorohoro izay hotafihany, dia ny basy kilalao sy antsy lava iray.
Raha araka ny fanazavan-dRamalanjaona Mamy, kandida ben’ny tanàna natolotry ny TIM ao an-toerana dia miaina anaty tsy fandriampahalemana tanteraka ny mponina. Voakasik’izany ny ao Ankazotoho, Anosimahavelona… Na dia lalovan’ny reniranon’Ikopa sy Sisaony ihany koa aza izy ireo dia mbola mijaly fatratra amin’ny rano fisotro madio ny isan-tokantrano ankoatra ny loto izay miparitaka nefa vavahady idirana an’Antananarivo ity kaominina iray ity. Vonona ny hanova izany rehetra izany Atoa Mamy Ramalanjaona, kandida Ben’ny tanàna hatolotry ny antoko Tiako I Madagasikara tao amin’ity kaominina Anosizato andrefana ity. Anisan’ny mampiavaka azy ny fisian’ireo mpanolotsaina efatra miaraka aminy ary laharana fahefatra izy izay manome 4 x4. Ny filoha Ravalomanana no mpanohana azy, ary efa nitsangana ny komity manohana an’i Mamy Ramalanjaona na KMMR.
Legende : Ireo ekipan’ny TIM eo anivon’ny kaominina Anosizato Andrefana vonona hifaninana amin’ny fifidianana ho avy izao